विश्वकपको लागि न्यूजिल्यान्डको टिम घोषणा, को–कोले पाए मौका? - Everest Dainik - News from Nepal
विश्वकपको लागि न्यूजिल्यान्डको टिम घोषणा, को–कोले पाए मौका?
काठमाडौं, चैत २० । आउँदो आईसीसी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटका लागि न्यूजिल्यान्डले १५ सदस्यीय टोली घोषणा गरेको छ ।
यही मे ३० देखि जुलाई १४ तारिखसम्म इंग्ल्यान्ड र वेल्समा संयुक्त रुपमा आयोजना हुने विश्वकपका लागि न्यूजिल्यान्डले केन विलियम्सनको कप्तानीमा १५ सदस्यीय टोलीको घोषणा गरिएको हो ।
विश्वकप क्रिकेटमा न्यूजिल्यान्डका लागि सबैभन्दा अनुभवी ब्याट्सम्यान रोस टेलर पनि टीममा परेका छन् । उनको लागि यो चौथो विश्वकप हुनेछ । त्यस्तै, कप्तान विलियम्सन, टिम साउथी र मार्टिन गुप्टिलको लागि यो तेस्रो विश्वकप हो ।
याे पनि पढ्नुस को–को छन्, याे विश्वकप क्रिकेटमा १० अनुभवी खेलाडी?
न्यूजिल्यान्डले विकेटकिपर ब्याट्सम्यान टोम ब्लन्डललाई पहिलो पटक एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको लागि टीममा समावेश गरेको । उनले टेष्ट र टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेले पनि अहिलेसम्म एकदिवसीय क्रिकेटमा भने टीममा पर्न सफल भएका थिएनन् । घरेलु प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको आधारमा उनी टीममा पर्न सफल भएका हुन् ।
न्यूजिल्यान्डले तीन पटक टे«निङ क्याम्प गर्ने भएको छ । न्यूजिल्यान्डले पहिलो क्याम्प लिन्कोलनमा अप्रिल १५ र १६, दोस्रो २३–२४ र तेस्रो अप्रिल ३० देखि मे एक तारिखसम्म गर्नेछ ।
त्यसपछि न्यूजिल्यान्डले अष्ट्रेलियासँग तीन खेलको एकदिवसीय मैत्रीपूर्ण क्रिकेट खेल्नेछ । तर यो आईसीसीको आधिकारिक खेल भने होइन ।
न्यूजिल्यान्ड टीमः केन विलियम्सन (कप्तान), रोस टेलर, टोम लाथम, टोम ब्लुन्डल, मिचेल सन्टनर, कोलिन डे ग्रान्डहोम, लोकी फर्गुसन, टिम साउथी, ट्रेन्ट बोल्ट, कोलिन मुनरो, इश सोधी, हेनरी निकोलस, मार्टिन गप्टिल, मट हेनरी, जेमी निशाम ।
ट्याग्स: New Zealand Cricket Team, ODI World Cup